Maxaad ka taqaan duufaanta Florence ee aadka looga baqayo waxyeelladeeda? - BBC News Somali
Maxaad ka taqaan duufaanta Florence ee aadka looga baqayo waxyeelladeeda?
Waxaad maqashay duufaanta Florence, waxay halis ku haysaa xeebaha bari ee dalka Mareykanka waxaana laga bixiyey digniino badan oo ku saabsan musiibo.
Laakiin duufaanta noocan ah ee lagu magacaabay Florence maxay aad uga duwan ahay duufaannadii kale ee dhacay sannadkan, ama duufaannada kala ah Beryl, Chris iyo Debby?
Waxaan isku soo uruurinnay macluumaad ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ah ee sharraxaya sababta ay masuuliyiinta aad ugu walbahaarsan yihiin, iyo khasaaraha ka dhalan kara duufaanta Florence.
Duufaanta Florence oo ku dhufatay Maraykanka
Duufaanta Irma oo khasaare geysatay
Duufaan hor leh oo ku dhufatay dalka Mareykanka
Hal muuqaal oo la daawanayo
Dabeylaha ay duufaantan wadato waxaa laga yaabaa iney daciifeen maalmihii ugu dambeeyay oo ay noqdeen kuwo ku socda xawaare dhan 110 KM saacaddiiba, ama laakiin waxaa jirta cabsi ku saabsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqdhaqaaqa Florence ay ka dhalan karaan dhibaatooyin kale oo hor leh.
Dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegaya in ay daciifi karto markii ay dhulka u soo dhawaato ka dibna ay wareegi karto ilaa maalinta sabtida ah, iyadoo gaareysa meelo aan la filan karin oo ka mid ah xeebaha isla markaana sababeysa roobab.
Dowladda ayaa amar ku bixisay in ilaa 1.7 malyan oo ruux laga daad gureeyo gobollada North Carolina, South Carolina iyo Virginia.
Hal sawir oo cabsi leh
Image caption Florence oo garaacaysa meel ka baxsan xeebaha bari ee Maraykanka ee badweynta Atlantic
Sawirkan maalintii Arbacada laga qaaday satalaytka ee muujinaya duufaanta Florence waxaa la arkayaa iney ku wajahan tahay xeebaha bari, wuxuuna caddeynayaa sida ay u awood badan tahay duufaantan.
Cimilo saadaaliye ka tirsan waaxda cimilada ee qaranka ayaa sheegay in tani ay noqon karto "duufaantii abid ugu darneyd" ee soo marta qeybo ka mid ah xeebaha Carolina.
Sarkaal ka tirsan kooxaha gurmadka ayaa isagana sheegay in "feer culeyskiisu le'eg yahay midka "Mike Tyson" uu ku dhacayo deegaanka.
Qaar kale oo ka mid ah khubarada cimilada saadaalisa ayaa sheegay in duufaantan ay noqon karto tii ugu xumeyd ee abid ka dhacda halkaas.
Hal tiro oo weyn
Florence ayaa sababi karta khasaare hantiyeed oo dhan $170 bilyan oo doolar una dhigma £130 bilyan oo gini, waxaana ku burburi kara 759,000 dhisme oo isugu jira guryo iyo goobo ganacsi, sida ay sheegtay hay'adda wax falanqeysa ee lagu magacaabo CoreLogic.
Xitaa warshadaha soo saara tamarka ayaa ka digay in duufaantu ay saameyn ku yeelan karto hannaankooda wax soo saarka.
Taas ayaa horseedi karta in shacabka ay muddo dheer heli waayaan awoodaha tamarta, sida shidaalka.
Image caption Duufaantii Floyd ee ku dhufatay North Carolina 1999
Haddii ay duufaantu soo caga dhigato, waxyaabaha ugu horreeya ee ka dhalan kara waxaa ka mid ah roobab mahiigaan ah.
Hase ahaatee khatarta ugu weyn ayaa noqon karta fatahaado dhimasho sababa oo ka dhalan kara duufaanta.
Daadadkan oo ku soo rogman kara qeybo ka mid ah xeebaha Waqooyiga Carolina ayaa laga cabsi qabaa iney noqdaan kuwo wata biyo dhulka ka kacsan ilaa 13 cagood oo la mid ah 4 mitir.
Waxyeelladaas ayaa sidoo kale saameyn xun ku yeelaneysa deegaanka iyo dhirta
Dhammaan arrimahaan ayaa abuuray argagax xoog leh oo ka jira gobolka, iyadoo dadku ay ka baqayaan musiibo ballaaran.
Gobolka North Carolina ayaa horay u arkay dhibaatada noocaas ah. Sannadkii 1999-kii ayey gobolkaas ku dhufatay duufaanta Floyd oo sababtay iney soo rogmadaan fatahaado wata biyo sumeysan.
Xayawaannada guryaha lagu xannaaneysto oo baqti ah ayaa dul sabbeynayay daadadka ka dhashay duufaantaas oo lahayd saameyn aad u weyn.
Hal oraah oo wadata sheeko
"Anigu waan joogayaa. Guryaha ka sameysan dhagaxa iyo shubka ayaana ilaalinaya". Waxaa sidaas tiri, Solange Iliou Thompson, oo ah haweeney milkiile ka ah makhaayad ku taalla magaalada Wilmington ee gobolka North Carolina.
Dad fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan xeebaha ayaa raacay amarka daad gureynta ah, laakiin kuwo kale ayaa wacad ku maray ineysan ka tageynin halkaas oo ay ku dadaali doonaan sidii ay ku badbaadi lahaayeen, iyagoo meeshooda jooga.
Solange Iliou Thompson, oo makhaayad ku leh magaalada Wilmington ee gobolka North Carolina ayaa warkeeda caddeysatay.
"Anigu waan joogayaa. Maxaad sameyn kartaa? Ma joojin kartid arrin dabiici ah" ayey ku tiri wakaaladda AFP.
Nin kale oo kawaan hilib ku leh isla magaaladaas ayaa isagana wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu iska joogi doono.
"Anigu wax cabsi ah kama qabo duufaanta Florence, way iska dhici doontaa. Waxaa nalaga rabaa oo kaliya inaan sameyno sidii aan uga gudbi lahayn."